Home›Posts Tagged "Zimbabwe" (Page 3)
London, Sep 23, 2019 (AltAfrica)-Zimbabwe’s founding president Robert Mugabe had “advanced cancer” when he died in hospital in Singapore on September 6, the state-owned newspaper reported on Monday. The former guerilla leader, who died aged 95, came to power at the end of white minority rule in 1980 and ruled Zimbabwe uninterrupted for 37 years ...
London, Sep 13, 2019 (AltAfrica)-ZIMBABWEAN ex-president Robert Mugabe will be buried next week in his village, his family said on Thursday, delivering an apparent snub to government plans to bury him at a national monument. Mugabe died in Singapore last week aged 95, leaving Zimbabweans divided over the legacy of a leader once lauded as ...
London, Sep 12, 2019 (AltAfrica)-Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa on Thursday said 11 heads of State had so far confirmed attendance at former President Robert Mugabe’s funeral parade slated for the National Sports Stadium on Saturday. Mnangagwa, who was accompanied by members of the ruling ZANU-PF politburo and service chiefs, visited the grieving Mugabe family at ...
London, Sep 7, 2019 (AltAfrica)-Robert Mugabe will be buried at a hilltop shrine reserved exclusively for Zimbabwe’s ruling elite, an official said Saturday, as the southern African nation began several days of official mourning. “Comrade Mugabe will be buried at the Heroes Acre,” deputy information minister Energy Mutodi said. “That is where he deserves to ...
London, Sep 6, 2019 (AltAfrica)-African leaders are united in paying tribute to Zimbabwe’s founding president Robert Mugabe also famously called “Uncle Bob” who died in the early hours of Friday. He ruled the country for close to four decade President Uhuru Kenyatta has ordered the Kenyan flag be flown at half mast in honour of ...
Edited by Olabisi Adesina London, Sep 6, 2019 (AltAfrica)-In Zimbabwe, the National Aids Council (NAC) has resorted to introducing clinics that operate at night to provide HIV/AIDS testing services to “key populations” like truckers. NAC Mashonaland East provincial manager, Wilfred Dube said the novel idea already operational in Murehwa area targeting truck drivers who use ...